” သူတို့ အားလုံးက စတားမန်းတွေ ဖြစ်ချင်ကြတာပါ ” ဆိုးလ်ရှားနဲ့ ယူနိုက်တက် ကစားသမားတွေကို ဝေဖန်လိုက်တဲ့ မီကာ ရစ်ချက် - xyznews.co
” သူတို့ အားလုံးက စတားမန်းတွေ ဖြစ်ချင်ကြတာပါ ” ဆိုးလ်ရှားနဲ့ ယူနိုက်တက် ကစားသမားတွေကို ဝေဖန်လိုက်တဲ့ မီကာ ရစ်ချက်
မန်စီးတီး အသင်းရဲ့ ခံစစ် ကစားသမားဟောင်း တစ်ဦး ဖြစ်တဲ့ မီကာ ရစ်ချက် က မြို့ခံ ပြိုင်ဖက်ဟောင်း ယူနိုက်တက်တို့ လီဗာပူးကို5ဂိုးပြတ်ရှုံးနိမ့်ခဲ့ကြတဲ့နောက် နည်းပြ ဆိုးလ်ရှားနဲ့ အသင်းရဲ့ ကစားသမားတွေကို ဝေဖန် ထိုးနှက် သွားခဲ့လိုက် ပါတယ် ။
အဆိုပါ ရှုံးပွဲကြောင့် ယူနိုက်တက် နည်းပြ ဆိုးလ်ရှားက အလုပ် အထုတ်ခံရတော့မဲ့ ဖိအားတွေအောက် ကျရောက်ခဲ့ရပြီး လာမဲ့ ပွဲစဥ်3ပွဲမှာ ရလဒ် မကောင်းခဲ့ရင် အထုတ်ခံရလိမ့်မယ်လို့တောင် သတင်းတွေ အရမ်း ကျယ်လောင်နေခဲ့ပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
အခုတော့ မီကာ ရစ်ချက်က နည်းစနစ် ကြွယ်ဝမှု မရှိတဲ့ ယူနိုက်တက် နည်းပြ ဆိုးလ်ရှားကို ဝေဖန် သွားခဲ့လိုက်ပြီး ယူနိုက်တက် ကစားသမားတွေဟာ အသင်း တစ်သင်းလို စုဖွဲ့ ကစားပေးနိုင်စွမ်း ရှိကြသူတွေ မဟုတ်ကြောင်း ထိုးနှက် သွားခဲ့လိုက် ပါတယ် ။
” ဒါက တစ်ကိုယ်တော် စွမ်းရည်ပဲ ပြနိုင်တဲ့ အသင်းပါ ၊ အသင်းလိုက် ကစားပေးနိုင်တဲ့ အသင်းမျိုး မဟုတ်ပါဘူး ။ သူတို့တွေဟာ ဘောလုံးရဲ့ အခြေခံ သဘောတရားတွေ ဖြစ်တဲ့ ပြေးလွှားခြင်း ၊ လုယူခြင်းတွေကို လုပ်ဆောင်ကြခြင်း မရှိကြပဲ စတား ကစားသမားတွေပဲ ဖြစ်ချင်နေကြတာပါ “
” အကယ်လို့ ခင်ဗျားဟာ ရော်နယ်ဒိုကို ခေါ်ယူလိုက်မယ်ဆိုရင် ဘယ်လို ကစားပုံမျိုး ပြောင်းလဲသွားမလဲ ? ရော်နယ်ဒို ကို ခေါ်လို့ ရနိုင်ခြေ ရှိတယ် ဆိုတာနဲ့ ခေါ်လိုက်တယ် ။ ပြီးတော့ ဘရူနို ၊ ပေါ့ဂ်ဘာ ၊ ရပ်ရှ်ဖို့ ၊ ဆန်ချို ၊ ဂရင်းဝုဒ် တို့နဲ့ တွဲကစားစေဖို့ ကြိုးစားတယ် ၊ အဲ့တာက ဟန်ချက် 1 ခုကို ဘယ်လိုလုပ် ရရှိစေနိုင်မလဲ ? “
” အကယ်လို့ ခင်ဗျား အဲ့လို ဇွတ်ကစားချင်မယ်ဆိုရင်လဲ ရော်နယ်ဒိုရဲ့ အနောက်မှာ ကစားပေးနိုင်တဲ့ ကစားသမားမျိုးကို ထည့်သွင်းရမယ်လေ ။ ဆိုးလ်ရှား ကတော့ တိုက််စစ်ဆင် ကစားမယ်လို့ တွင်တွင်ပြောဆိုနေခဲ့ပါသေးတယ် ။ ဒါပေမဲ့ တကယ်တမ်းတော့ ကစားပုံတွေက ဘာဆိုဘာမှ ထူးမလာခဲ့ပါဘူး “
” သူတို့ ကွင်းလယ် ခံစစ် နှစ်ယောက်ထားပြီး ခုခံ ကစားနိုင်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ် ။ နောက်ခံအစွန်လူတွေလည်း ခံစစ် ကစားရင်း ကောင်တာတိုက်စစ်ဆင်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ် ။ ဒါပေမဲ့ ယူနိုက်တက်ရဲ့ ခံစစ် ကစားပုံက မန်စီးတီး ၊ လီဗာပူး ၊ ချဲလ်ဆီး တို့လို ကောင်းမနေခဲ့ပါဘူး ။ သူတို့ ဘောလုံး အခြေခံ လိုအပ်ချက်တွေကို လုပ်ပြဖို့ လိုအပ််နေခဲ့ကြပါတယ် “
” ဆိုးလ်ရှား ဆိုတာ ဂန္တဝင် ကစားသမား ဆိုတဲ့ ဂုဏ်ပုဒ် ပိုင်ဆိုင်ထားခဲ့သူ တစ်ဦးပါ။ ဒါ့ကြောင့် အခုလိုရက်စွဲတွေ ပိုင်ဆိုင်ရတာက သူ့အတွက် ရင်ဆိုင်ရ ခက်ခဲလှပါတယ် ။ အခုလို ရလဒ်တွေက နည်းပြမှု အပိုင်းပေါ် အတော်လေး မူတည်နေပါတယ် ။ အချို့အရာတွေ ၊ အခြေခံ လိုအပ်ချက််တွေက မှားယွင်းနေခဲ့ရပါတယ် “
” သူတို့က ဘယ်အချိန် ဖိပြီးကစားရမလဲ ၊ ဘယ်အချိန် ခံစစ် အထိုင်ကစားရမလဲ ဆိုတာကို မသိကြသူတွေ ပါပဲ ။ အိုလီ့ကို ကြည့်ရတာ သူလည်း ဘာလုပ်လို့ လုပ်ရမှန်း မသိပုံ ပေါ်နေခဲ့ပါတယ် ။ ယူနိုက်တက် အနေနဲ့ သူ့ကို ထောက််ခံပြီး ရာသီကုန်ထိ ကိုင်တွယ်ဖို့ ၊ အောင်မြင်မှု ယူပေးဖို့ ပြောသင့်ပါတယ် “
” ကျွန်တော် သူ့အတွက် စိတ်မကောင်း ဖြစ်မိပါတယ် ။ သူဟာ ဂန္တဝင် ဆိုတဲ့ ဂုဏ်ပုဒ်မျိုး ပိုင်ဆိုင်ထားသူလေ ။ ဒါပေမဲ့ ကစားကွက်က နက်နဲမှု မရှိသေးပါဘူး ။ အကယ်လို့ ပြသနာကို မရှင်းနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ ယူနိုက်တက်တို့ သူမပါပဲ ရှေ့ဆက်ရပါလိမ့်မယ် ” လို့ မီကာ ရစ်ချက် က ပြောကြား သွားခဲ့လိုက် ပါတယ် ။
Previous Article လူငယ် တိုက်စစ်မှူး နှစ်ဦး ဖြစ်တဲ့ အန်ခီတီးယား နဲ့ ဘာလိုဂန် တို့ရဲ့အနာဂတ် နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြောကြာလိုက်တဲ့ အာတီတာ
Next Article ၀က်ဖို့ဒ်ကို ၅-၀ နဲ့ နိုင်ထားခဲ့တာတောင်မှ ပွဲအပြီးမှာ သူ့ကို ဆာလား ဘာလာမေးခဲ့သလဲဆိုတာ ထုတ်ဖော်လိုက်တဲ့ ဖော်စတာ